Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) Ndị na-emepụta - Phcoker
Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (aha mmepe aha ISF 2522) bụ ọgwụ nootropic nke ezinụlọ racetam ma dị nwayọọ …….
ikike: 1420kg / ọnwa
Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) video
Raw (R) -Oxiracetam uzuzu bụ (R) -enantiomer nke oxotopetam nootropic ọgwụ. Oxiracetam (ISF 2522) bụ ọgwụ nootropic nke ezinụlọ racetam na-akpali akpali. IC50 uru: Ebumnuche: Oxiracetam ọgwụ ọjọọ (ISF 2522) bụ ọgwụ nootropic nke ezinụlọ racetam na-akpali akpali.   Ọtụtụ nchọpụta anụmanụ na-egosi na ihe ahụ dị nchebe ọbụna mgbe nnukwu azụ na-eri ogologo oge. Ma ihe ọ bụla, usoro nke ụlọ ọgwụ ọgwụ racetam ka na-eme nchọpụta. Ogwu Nri na Drug Administration agaghị akwado Oxiracetam maka ọgwụgwọ ọ bụla na United States.
Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) Smmezi
Product Name Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ
Chemical Aha Raw (R)-Oxiracetam powder;68252-28-8; (R)-2-(4-HYDROXY-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETAMIDE;
ika aha Enweghị data maka dịnụ
molekụla Wasatọ 158.16
Mgbu Point Enweghị data maka dịnụ
Antinye Akara oxiracetam (O846905) nke na-enweghị ike dị ka onye nootropic karịa ya (-) - S enantiomer.
raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) Nkọwa
Raw (R) -Oxiracetam uzuzu bụ (R) -enantiomer nke oxotopetam nootropic ọgwụ. Oxiracetam (ISF 2522) bụ ọgwụ nootropic nke ezinụlọ racetam na-akpali akpali. IC50 uru: Ebumnuche: Oxiracetam ọgwụ ọjọọ (ISF 2522) bụ ọgwụ nootropic nke ezinụlọ racetam na-akpali akpali.   Ọtụtụ nchọpụta anụmanụ na-egosi na ihe ahụ dị mma ọbụlagodi mgbe a na-eri ihe dị elu ruo ogologo oge Ma ihe ọ bụla, usoro nke ụlọ ọgwụ ọgwụ racetam ka na-eme nchọpụta. Ogwu Nri na Drug Administration agaghị akwado Oxiracetam maka ọgwụgwọ ọ bụla na United States
(R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) Ime ihe
(R) -oxiracetam, bụ ihe mpempe akwụkwọ dị irè nke belata ihe mgbochi nke ọmụmụ ihe na ebe nchekwa site na ịmalite imebi ọnyá na-acha ọcha, na-arịwanye ọbara ọbara ọbara, ma na-egbochi ịmalite ịgụ kpakpando na ụbụrụ nke ụbụrụ na-adịghị ala ala.
uru of (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8)
-atụ aro (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8) Ọgwụgwọ
mmetụta of (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8)